जसको मृत्युले पूरै अमेरिका ज’लिरहेछ, उनी कोरोना संक्रमित थिए ! – हाम्रो देश
जसको मृत्युले पूरै अमेरिका ज’लिरहेछ, उनी कोरोना संक्रमित थिए !
काठमाडौं। अफ्रिकन अमेरिकी मू’लका नागरिक ज’र्ज फ्लो’एडको प्रहरी हि’रासतमा मृ’त्यु भएपछि अहिले पूरै अमेरिका ज’लिरहेको छ । यहाँ रं’गभेदविरोधी आ’न्दोलन उ’त्कर्षमा छ ।
पछिल्लो समय उनको मृ’त्युको बारेमा अनुसन्धान हुँदै जाँदा उनी कोरोनाभाइरस संक्रमित भएको खु’लासा भएको छ । हे’न्नेपिन का’उन्टी मे’डिकल ए’ग्जामिनरको अ’फिसले जा’री गरेको पो’ष्टमर्टम रि’पोर्टमा उनलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। ४६ वर्षिय फ्लो’एडमा गत अ’प्रिल ३ मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको रि’पोर्टले जनाएको छ।
उनको मृ’त्युपछि पनि मि’नीसोटाको स्वास्थ्य विभागले स्वा’ब परीक्षण गरेको थियो। त्यसमा पनि कोरोनाभाइरस पोजिटिभ देखिएको मे’डिकल ए’ग्जामिनरका प्रमुख ए’न्ड्रिउ ए’म बे’करले बताए।
गत सोमबार जर्ज फ्लो’एडलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा अ’त्याधिक ब’ल प्रयोगका कारण मृ’त्यु भएको थियो। एक गोरा प्रहरीले उनको घाँ’टीमा ८ मिनेट ४६ सेकेन्डसम्म थि’चेका थिए। ‘म सास फे’र्न सक्दिनँ,’ भन्दै या’चना गरिरहेका फ्लो’एडको केहीबेरपछि मृ’त्यु भएको थियो। फ्लो’एडलाई प्रहरी अधिकारीले गरेको क्’रुरता भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो।